နာမည်ကြီး Esports ဂိမ်းတွေမှာ အမုန်းစကားတွေပြောရင် ဘယ်လို ဒါဏ်ပေးခံရမလည်း? – Gaming Noodle
အွန်လိုင်းဂိမ်းမျိုးစုံရဲ့ ကစားပွဲများမှာ ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့သူစိမ်းများကတော့ အမြဲနီးပါး ပါဝင်နေလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ကစားဖော်ဖြစ်စေ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စေ ပွဲအတွင်းကြုံတွေ့လာတဲ့ သူစိမ်းများနဲ့ စိတ်သဘောထား မတိုက်ဆိုင်ရင်တော့ စကားပြောရင်း ကတောက်ကဆဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ racist စကားလုံးများနဲ့ အနှောင့်အယှက်ပေးတဲ့ trash talk များကိုတော့ မပြောသင့်ကြောင်း အများကလက်ခံထားကြပြီး ဂိမ်းအတော်များများမှာ ထိုစကားလုံးပြောတဲ့သူများကို အပြစ်ပေးစနစ်များ ရှိနေကြပါတယ်။
Ubisoft ဟာ Rainbow Six: Siege ထဲမှာ racist စကားလုံးပြောသူ များပြားလာလို့ ဖြေရှင်းဖို့ ဖိအားပေးခံခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ developer များဟာ game chat အတွင်းက racist ပြောသူများကို အလိုအလျှောက် ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး အပြစ်ဒဏ်ပေးမယ့် စနစ်တစ်ခုကို ဂိမ်းအတွင်း ထည့်သွင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ ဥပမာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး လက်ရှိနာမည်ကျော်နေတဲ့ဂိမ်းများထဲမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ racist စကားလုံးများနဲ့ အနှောင့်အယှက်ပေးတဲ့ trash talk ပြောသူများအတွက် အပြစ်ဒဏ်ပေးစနစ်များ အသီးသီးရှိကြပါတယ်။
ဂိမ်းအတော်များများရဲ့ စည်းကမ်းများထဲမှာမှ League of Legends ရဲ့ Summoner’s Code ဟာ အတော်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ League of Legends မှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ racist စကားလုံးများနဲ့ တဖက်လူကို နစ်နာအောင်ပြောတဲ့ trash talk ပြောသူများကို report ပြုလုပ်တိုင်ကြားနိုင်မယ့် Instant Feedback System တစ်မျိုးပါဝင်ပြီး တိုင်ကြားခံရသူ ပြောသွားခဲ့တဲ့ chat log များကို မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး အပြစ်ပေးပါတယ်။ Report ပြုလုပ်ခံရတဲ့ ကစားသမား အပြစ်ပေးခံရရင် တိုင်ကြားသူထံကို မက်ဆေ့ပြန်လည်ပို့ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
အပြစ်ဒဏ်များအနေနဲ့ကတော့ ပထမအကြိမ်အနေနဲ့ ဂိမ်း ၁၀ ပွဲ chat restriction အပြစ်ပေးခံရမှာဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ ၂၅ ပွဲ chat restriction အပြစ်ပေးမှာပါ။ တတိယအကြိမ်မှာ ဂိမ်းကစားခွင့် ၂ ပတ် ရပ်ဆိုင်းခံရမှာဖြစ်ပြီး စတုတ္ထအကြိမ်ဆိုရင်တော့ ရာသက်ပန် ကစားခွင့် ရပ်ဆိုင်းခံရနိုင်ပါတယ်။
Fortnite မှာတော့ လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ racist စကားလုံးများနဲ့ တဖက်လူကို နစ်နာအောင်ပြောတဲ့ trash talk ပြောသူတွေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျပြောကြားထားခြင်း မရှိပါဘူး။ Online ပေါ်က အချို့ forum များမှာတော့ racist ပြောမိလို့ ခဏတာဖြစ်စေ ရာသက်ပန်ဖြစ် ဂိမ်းကစားခွင့် ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့ ကစားသမားများအကြောင်းကို ရေးထားတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုချိန်ထိ အပြစ်ပေးခံရသူ အများစုကတော့ solo mode မှာ အသင်းဖွဲ့ ကစားသူများ နဲ့ cheater များပဲဖြစ်နေဆဲပါ။
ဂိမ်းထဲမှာ မိမိ သေသွားပြီးနောက် သတ်သွားတဲ့သူကို report လုပ်နိုင်မယ့်စနစ်သာ ထည့်သွင်းထားလို့ အခြားကစားသမားများကို report လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ feedback ဆိုတဲ့ menu option ကို သွားရောက် ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Report လုပ်ချင်တဲ့ ကစားသမားရဲ့နာမည်ကို မဖြစ်မနေ သိဖို့လိုအပ်ပြီး ပြဿနာကြီးမားတယ်ဆိုရင်တော့ support center ထိ သွားရောက်တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်။
Dota2အတွင်းမှာတော့ report ပြုလုပ်ခံရတဲ့အကြိမ်များလေ အပြစ်ဒဏ်ကြီးလေပါ။ လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ racist စကားလုံးများနဲ့ တဖက်လူကို နစ်နာအောင်ပြောတဲ့ trash talk ပြောသူများကို communication abuse ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရွေးချယ် report လုပ်နိုင်ပြီး ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်ကို တစ်ပါတည်း ရေးပေးလိုက်သင့်ပါတယ်။ ကစားသမားများဟာ တစ်ပတ်ကို ၃ ကြိမ်သာ report ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ အပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးပြီဆိုရင် တိုင်ကြားသူကို မက်ဆေ့ပြန်လည်ပေးပို့ပါတယ်။
အပြစ်ဒဏ်များအနေနဲ့ ၁၀ မိနစ်ကနေ ၁ နာရီ အထိ ဂိမ်းအတွင်း စကားပြောခွင့် ပိတ်ခံရမှာဖြစ်ပြီး ပိုမိုဆိုးရွားရင်တော့ တစ်ရက်လုံးဖြစ်စေ တစ်ပတ်ဖြစ်စေ အပိတ်ခံရမှာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ တူညီစွာ ထပ်မံ report အလုပ်ခံရရင် လနဲ့ချီ အပိတ်ခံရမှာဖြစ်ပြီး အဆိုးရွားဆုံးအပြစ်ဒဏ်ကတော့ ၆ လ တိတိ ကစားခွင့် ပိတ်သိမ်းခံရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
PUBG မှာ အခြားကစားသမားများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သူကတော့ ပထမဆုံးအပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ ၃ ရက် ban ခြင်းကို ခံရမှာပါ။ ဒုတိယအကြိမ်နဲ့ တတိယအကြိမ်တို့မှာ တစ်ပတ်နဲ့ တစ်လ စီ ban ခံရမှာဖြစ်ပြီး စတုတ္ထအကြိမ်ထပ်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ရာသက်ပန် ban ခံရမှာပါ။
PUBG မှာ ဂိမ်းအတွင်း မိမိကို သတ်သွားသူကိုသာ report လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပြီး အခြားသူများကို report လုပ်ဖို့ မပါဝင်ပါဘူး။ Racist နဲ့ trash talk ပြောသူများအတွက် အနီးစပ်ဆုံး report လုပ်နိုင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ improper nickname သာ ရှိပြီး ဂိမ်းအတွင်း အနှောက်အယှက်ပေးပြောဆိုခြင်းများအတွက် report သီးသန့် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ PUBG ရဲ့ တာဝန်ရှိသူများကတော့ PUBG forum မှာ report လုပ်ချင်တဲ့ ကစားသမားရဲ့ နာမည်၊ report ပြုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းအရာ၊ အချိန်နဲ့ နေ့စွဲတို့ကို အတိအကျ တင်ပြီး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်လို့တော့ ပြောထားကြပါတယ်။
CS: GO ဟာ cheater များကို အလိုအလျှောက်ဖမ်းမိနိုင်မယ့် VACnet ဆိုတဲ့ စနစ်ရှိပေမယ့်လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ racist စကားလုံးများနဲ့ တဖက်လူကို နစ်နာအောင်ပြောတဲ့ trash talk ပြောဆိုသူများကို အလိုအလျှောက် ဖမ်းပေးမယ့် စနစ်တော့ မပါဝင်ပါဘူး။ VACnet နဲ့ တွဲဘက် Overwatch စနစ် နှစ်ခုတို့ဟာ cheater များနဲ့ hacker များကိုသာ ထိထိရောက်ရောက်ဖမ်းပြီး ပြစ်ဒဏ်ပေးကြပါတယ်။
ပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ကတော့ ရက် ၃၀ လောက် ban ခံရစေမယ့် minorly disruptive နဲ့ ရာသက်ပန် ban ခံရစေမယ့် majorly disruptive တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင် အပြောခံရမယ်ဆိုရင်တော့ ပွဲအတွင်းမှာ Abusive text and voice chat ပြုလုပ်ကြောင်း report တင်နိုင်ပါတယ်။ Block communications ပြုလုပ်ပြီးလည်း ပြောတဲ့သူကို mute လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Rocket League မှာ racist ပြောဆိုသူများကို အလိုအလျှောက် ban ပေးမယ့် စနစ်ပါဝင်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ မှာ Rocket League အတွင်းပြောရင် ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရမယ့် စကားလုံး ၂၀ ရှိခဲ့ပြီး ဆင်တူတဲ့စကားလုံးများ ပြောတာကိုလည်း လက်မခံပါဘူး။ စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီအတွက် အပြစ်ဒဏ်များဟာ ကွဲပြားပြီး ၂၄ နာရီ စတင် ban ခံရတာကနေ ၃ ရက်၊ တစ်ပတ် နဲ့ နောက်ဆုံး လုံးဝ ကစားခွင့်ရပ်ဆိုင်းခံရတာအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဂိမ်းအတွင်း လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ racist စကားလုံးများနဲ့ တဖက်လူကို နစ်နာအောင်ပြောတဲ့ trash talk ပြောသူများကို တိုက်ရိုက် report လုပ်နိုင်မယ့် စနစ်လည်း ပါဝင်ပြီး ပြောသူအပြစ်ရှိတာ မှန်ကန်ရင် ၂၄ နာရီကနေ တစ်လ အထိ ဂိမ်းအတွင်း စကားပြောဆိုခွင့် ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ပါတယ်။ Ban ခံရသူများနဲ့ အခြားပြစ်ဒဏ်ပေးခံရသူများအတွက် ဂိမ်းရဲ့ main menu မှာ ပြစ်ဒဏ်ပေးကြောင်း notification ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Overwatch ထဲမှာ အရင်က လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ racist စကားလုံးများနဲ့ တဖက်လူကို နစ်နာအောင်ပြောတဲ့ trash talk ပြောဆိုသူများကို စကားပြောလို့ မရအောင် mute ပဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဂိမ်းကစားလို့ မရအောင်ပါ ကန့်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ Report လုပ်ခံရတဲ့ ကစားသမားများဟာ စ စ ချင်းမှာ သတိပေးခြင်းသာ ခံရမှာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ report လုပ်ခံရတဲ့အကြိမ်များရင် များသလောက် အပြစ်ဒဏ်တိုးပေးသွားပါတယ်။ ဘယ်လို စံချိန်စံနှုန်းနဲ့ အပြစ်ဒဏ်တိုးလဲဆိုတာ တိတိကျကျ မပြောထားပေမယ့် ရာသက်ပန် ကစားခွင့် ရပ်ဆိုင်းတဲ့ထိ ပါဝင်တယ်လို့တော့ ဆိုပါတယ်။
ကစားသမားများဟာ report ပြုလုပ်တာအပြင် ပွဲအတွင်းမှာဖြစ်စေ ပွဲပြီးချိန်မှာဖြစ်စေ အခြားကစားသမားနှစ်ယောက်အထိကို ‘avoid as teammate’ ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ ဒီလိုပြုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် နောက်ပွဲများမှာ ထိုကစားသမားများ မပါဝင်လာအောင် ကန့်သတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဂိမ်းအတွင်း အခြားသူများကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင် racist စကားလုံးများနဲ့ trash talk ပြောဆိုခြင်းများဟာ မပြုလုပ်သင့်တဲ့အရာများပါ။ ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရခြင်းများအပြင် အသင်းဖော်အချင်းချင်းပြောဆိုရင် ဂိမ်းပွဲကို ရှုံးနိမ့်အောင် ပြုလုပ်သလိုဖြစ်နိုင်ပြီး ပြိုင်ဘက်အသင်းမှ ကစားသမားများကို ပြောသူများဟာလည်း esports စိတ်ဓာတ် မရှိသူများအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း ခံရနိုင်ပါတယ်။ ကစားသမားတိုင်းဟာ အနှောင့်အယှက်ပေး ပြောဆိုခံရတာ နည်းပါးပြီး ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကစားပွဲများကိုသာ အလိုရှိနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
နာမညျကွီး Esports ဂိမျးတှမှော အမုနျးစကားတှပွေောရငျ ဘယျလို ဒါဏျပေးခံရမလညျး?
အှနျလိုငျးဂိမျးမြိုးစုံရဲ့ ကစားပှဲမြားမှာ ကိုယျနဲ့မသိတဲ့သူစိမျးမြားကတော့ အမွဲနီးပါး ပါဝငျနလေရှေိ့ပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ကစားဖျောဖွဈစေ ပွိုငျဘကျဖွဈစေ ပှဲအတှငျးကွုံတှလေ့ာတဲ့ သူစိမျးမြားနဲ့ စိတျသဘောထား မတိုကျဆိုငျရငျတော့ စကားပွောရငျး ကတောကျကဆဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျလိုအခွအေနမှောပဲဖွဈဖွဈ လူမြိုးရေးခှဲခွားတဲ့ racist စကားလုံးမြားနဲ့ အနှောငျ့အယှကျပေးတဲ့ trash talk မြားကိုတော့ မပွောသငျ့ကွောငျး အမြားကလကျခံထားကွပွီး ဂိမျးအတျောမြားမြားမှာ ထိုစကားလုံးပွောတဲ့သူမြားကို အပွဈပေးစနဈမြား ရှိနကွေပါတယျ။
Ubisoft ဟာ Rainbow Six: Siege ထဲမှာ racist စကားလုံးပွောသူ မြားပွားလာလို့ ဖွရှေငျးဖို့ ဖိအားပေးခံခဲ့ရပါတယျ။ နောကျဆုံးမှာတော့ developer မြားဟာ game chat အတှငျးက racist ပွောသူမြားကို အလိုအလြှောကျ ရှာဖှတှေရှေိ့ပွီး အပွဈဒဏျပေးမယျ့ စနဈတဈခုကို ဂိမျးအတှငျး ထညျ့သှငျးခဲ့ရပါတယျ။ ဒါဟာ ဥပမာတဈခုသာဖွဈပွီး လကျရှိနာမညျကြျောနတေဲ့ဂိမျးမြားထဲမှာ လူမြိုးရေးခှဲခွားတဲ့ စကားလုံးမြား ပွောသူမြားအတှကျ အပွဈဒဏျပေးစနဈမြား အသီးသီးရှိကွပါတယျ။
ဂိမျးအတျောမြားမြားရဲ့ စညျးကမျးမြားထဲမှာမှ League of Legends ရဲ့ Summoner’s Code ဟာ အတျောကယျြပွနျ့ပါတယျ။ League of Legends မှာ လူမြိုးရေးခှဲခွားတဲ့ racist စကားလုံးမြားနဲ့ တဖကျလူကို နဈနာအောငျပွောတဲ့ trash talk ပွောသူမြားကို report ပွုလုပျတိုငျကွားနိုငျမယျ့ Instant Feedback System တဈမြိုးပါဝငျပွီး တိုငျကွားခံရသူ ပွောသှားခဲ့တဲ့ chat log မြားကို မိနဈအနညျးငယျအတှငျး ပွနျလညျစဈဆေးပွီး အပွဈပေးပါတယျ။ Report ပွုလုပျခံရတဲ့ ကစားသမား အပွဈပေးခံရရငျ တိုငျကွားသူထံကို မကျဆပွေ့နျလညျပို့ပေးလရှေိ့ပါတယျ။
အပွဈဒဏျမြားအနနေဲ့ကတော့ ပထမအကွိမျအနနေဲ့ ဂိမျး ၁၀ ပှဲ chat restriction အပွဈပေးခံရမှာဖွဈပွီး ဒုတိယအကွိမျမှာတော့ ၂၅ ပှဲ chat restriction အပွဈပေးမှာပါ။ တတိယအကွိမျမှာ ဂိမျးကစားခှငျ့ ၂ ပတျ ရပျဆိုငျးခံရမှာဖွဈပွီး စတုတ်ထအကွိမျဆိုရငျတော့ ရာသကျပနျ ကစားခှငျ့ ရပျဆိုငျးခံရနိုငျပါတယျ။
Fortnite မှာတော့ လူမြိုးရေးခှဲခွားတဲ့ racist စကားလုံးမြားနဲ့ တဖကျလူကို နဈနာအောငျပွောတဲ့ trash talk ပွောသူတှအေတှကျ ဘယျလောကျထိ ပွဈဒဏျပေးတယျဆိုတာကို တိတိကကြပြွောကွားထားခွငျး မရှိပါဘူး။ Online ပျေါက အခြို့ forum မြားမှာတော့ racist ပွောမိလို့ ခဏတာဖွဈစေ ရာသကျပနျဖွဈ ဂိမျးကစားခှငျ့ ပိတျသိမျးခံရတဲ့ ကစားသမားမြားအကွောငျးကို ရေးထားတာတှရှေိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုခြိနျထိ အပွဈပေးခံရသူ အမြားစုကတော့ solo mode မှာ အသငျးဖှဲ့ ကစားသူမြား နဲ့ cheater မြားပဲဖွဈနဆေဲပါ။
ဂိမျးထဲမှာ မိမိ သသှေားပွီးနောကျ သတျသှားတဲ့သူကို report လုပျနိုငျမယျ့စနဈသာ ထညျ့သှငျးထားလို့ အခွားကစားသမားမြားကို report လုပျခငျြတယျဆိုရငျတော့ feedback ဆိုတဲ့ menu option ကို သှားရောကျ ပွုလုပျရမှာဖွဈပါတယျ။ Report လုပျခငျြတဲ့ ကစားသမားရဲ့နာမညျကို မဖွဈမနေ သိဖို့လိုအပျပွီး ပွဿနာကွီးမားတယျဆိုရငျတော့ support center ထိ သှားရောကျတိုငျကွားနိုငျပါတယျ။
Dota2အတှငျးမှာတော့ report ပွုလုပျခံရတဲ့အကွိမျမြားလေ အပွဈဒဏျကွီးလပေါ။ လူမြိုးရေးခှဲခွားတဲ့ racist စကားလုံးမြားနဲ့ တဖကျလူကို နဈနာအောငျပွောတဲ့ trash talk ပွောသူမြားကို communication abuse ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျနဲ့ ရှေးခယျြ report လုပျနိုငျပွီး ဖွဈစဉျအကဉျြးခြုပျကို တဈပါတညျး ရေးပေးလိုကျသငျ့ပါတယျ။ ကစားသမားမြားဟာ တဈပတျကို ၃ ကွိမျသာ report ပွုလုပျနိုငျမှာပါ။ အပွဈဒဏျပေးပွီးပွီဆိုရငျ တိုငျကွားသူကို မကျဆပွေ့နျလညျပေးပို့ပါတယျ။
အပွဈဒဏျမြားအနနေဲ့ ၁၀ မိနဈကနေ ၁ နာရီ အထိ ဂိမျးအတှငျး စကားပွောခှငျ့ ပိတျခံရမှာဖွဈပွီး ပိုမိုဆိုးရှားရငျတော့ တဈရကျလုံးဖွဈစေ တဈပတျဖွဈစေ အပိတျခံရမှာပါ။ နောကျပိုငျးမှာ တူညီစှာ ထပျမံ report အလုပျခံရရငျ လနဲ့ခြီ အပိတျခံရမှာဖွဈပွီး အဆိုးရှားဆုံးအပွဈဒဏျကတော့ ၆ လ တိတိ ကစားခှငျ့ ပိတျသိမျးခံရမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
PUBG မှာ အခွားကစားသမားမြားကို အနှောငျ့အယှကျဖွဈအောငျ ပွုလုပျသူကတော့ ပထမဆုံးအပွဈဒဏျအနနေဲ့ ၃ ရကျ ban ခွငျးကို ခံရမှာပါ။ ဒုတိယအကွိမျနဲ့ တတိယအကွိမျတို့မှာ တဈပတျနဲ့ တဈလ စီ ban ခံရမှာဖွဈပွီး စတုတ်ထအကွိမျထပျဖွဈလာခဲ့မယျဆိုရငျတော့ ရာသကျပနျ ban ခံရမှာပါ။
PUBG မှာ ဂိမျးအတှငျး မိမိကို သတျသှားသူကိုသာ report လုပျနိုငျတာဖွဈပွီး အခွားသူမြားကို report လုပျဖို့ မပါဝငျပါဘူး။ Racist နဲ့ trash talk ပွောသူမြားအတှကျ အနီးစပျဆုံး report လုပျနိုငျတဲ့ ခေါငျးစဉျအနနေဲ့ improper nickname သာ ရှိပွီး ဂိမျးအတှငျး အနှောကျအယှကျပေးပွောဆိုခွငျးမြားအတှကျ report သီးသနျ့ မလုပျနိုငျပါဘူး။ PUBG ရဲ့ တာဝနျရှိသူမြားကတော့ PUBG forum မှာ report လုပျခငျြတဲ့ ကစားသမားရဲ့ နာမညျ၊ report ပွုလုပျရတဲ့အကွောငျးအရာ၊ အခြိနျနဲ့ နစှေဲ့တို့ကို အတိအကြ တငျပွီး ပွုလုပျနိုငျပါတယျလို့တော့ ပွောထားကွပါတယျ။
CS: GO ဟာ cheater မြားကို အလိုအလြှောကျဖမျးမိနိုငျမယျ့ VACnet ဆိုတဲ့ စနဈရှိပမေယျ့ လူမြိုးရေးခှဲခွားတဲ့ racist စကားလုံးမြားနဲ့ တဖကျလူကို နဈနာအောငျပွောတဲ့ trash talk ပွောဆိုသူမြားကို အလိုအလြှောကျ ဖမျးပေးမယျ့ စနဈတော့ မပါဝငျပါဘူး။ VACnet နဲ့ တှဲဘကျ Overwatch စနဈ နှဈခုတို့ဟာ cheater မြားနဲ့ hacker မြားကိုသာ ထိထိရောကျရောကျဖမျးပွီး ပွဈဒဏျပေးကွပါတယျ။
ပွဈဒဏျအနနေဲ့ကတော့ ရကျ ၃၀ လောကျ ban ခံရစမေယျ့ minorly disruptive နဲ့ ရာသကျပနျ ban ခံရစမေယျ့ majorly disruptive တို့ ပါဝငျပါတယျ။ အနှောကျအယှကျဖွဈအောငျ အပွောခံရမယျဆိုရငျတော့ ပှဲအတှငျးမှာ Abusive text and voice chat ပွုလုပျကွောငျး report တငျနိုငျပါတယျ။ Block communications ပွုလုပျပွီးလညျး ပွောတဲ့သူကို mute လုပျထားနိုငျပါတယျ။
Rocket League မှာ racist စကားလုံးမြား ပွောဆိုသူမြားကို အလိုအလြှောကျ ban ပေးမယျ့ စနဈပါဝငျပါတယျ။ ၂၀၁၇ မှာ Rocket League အတှငျးပွောရငျ ပွဈဒဏျပေးခံရမယျ့ စကားလုံး ၂၀ ရှိခဲ့ပွီး ဆငျတူတဲ့စကားလုံးမြား ပွောတာကိုလညျး လကျမခံပါဘူး။ စကားလုံးတဈလုံးခငျြးစီအတှကျ အပွဈဒဏျမြားဟာ ကှဲပွားပွီး ၂၄ နာရီ စတငျ ban ခံရတာကနေ ၃ ရကျ၊ တဈပတျ နဲ့ နောကျဆုံး လုံးဝ ကစားခှငျ့ရပျဆိုငျးခံရတာအထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဂိမျးအတှငျး racist စကားလုံးမြား နဲ့ trash talk ပွောသူမြားကို တိုကျရိုကျ report လုပျနိုငျမယျ့ စနဈလညျး ပါဝငျပွီး ပွောသူအပွဈရှိတာ မှနျကနျရငျ ၂၄ နာရီကနေ တဈလ အထိ ဂိမျးအတှငျး စကားပွောဆိုခှငျ့ ပိတျပငျခံရနိုငျပါတယျ။ Ban ခံရသူမြားနဲ့ အခွားပွဈဒဏျပေးခံရသူမြားအတှကျ ဂိမျးရဲ့ main menu မှာ ပွဈဒဏျပေးကွောငျး notification ပျေါလာမှာဖွဈပါတယျ။
Overwatch ထဲမှာ အရငျက လူမြိုးရေးခှဲခွားတဲ့ racist စကားလုံးမြားနဲ့ တဖကျလူကို နဈနာအောငျပွောတဲ့ trash talk ပွောဆိုသူမြားကို စကားပွောလို့ မရအောငျ mute ပဲ ပွုလုပျခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာတော့ ဂိမျးကစားလို့ မရအောငျပါ ကနျ့သတျခဲ့ပါတယျ။ Report လုပျခံရတဲ့ ကစားသမားမြားဟာ စ စ ခငျြးမှာ သတိပေးခွငျးသာ ခံရမှာဖွဈပွီး နောကျပိုငျးမှာတော့ report လုပျခံရတဲ့အကွိမျမြားရငျ မြားသလောကျ အပွဈဒဏျတိုးပေးသှားပါတယျ။ ဘယျလို စံခြိနျစံနှုနျးနဲ့ အပွဈဒဏျတိုးလဲဆိုတာ တိတိကကြ မပွောထားပမေယျ့ ရာသကျပနျ ကစားခှငျ့ ရပျဆိုငျးတဲ့ထိ ပါဝငျတယျလို့တော့ ဆိုပါတယျ။
ကစားသမားမြားဟာ report ပွုလုပျတာအပွငျ ပှဲအတှငျးမှာဖွဈစေ ပှဲပွီးခြိနျမှာဖွဈစေ အခွားကစားသမားနှဈယောကျအထိကို ‘avoid as teammate’ ပွုလုပျနိုငျမှာပါ။ ဒီလိုပွုလုပျထားခွငျးအားဖွငျ့ နောကျပှဲမြားမှာ ထိုကစားသမားမြား မပါဝငျလာအောငျ ကနျ့သတျထားနိုငျပါတယျ။
ဂိမျးအတှငျး အခွားသူမြားကို အနှောကျအယှကျဖွဈအောငျ racist စကားလုံးမြား နဲ့ trash talk ပွောဆိုခွငျးမြားဟာ မပွုလုပျသငျ့တဲ့အရာမြားပါ။ ပွဈဒဏျပေးခံရခွငျးမြားအပွငျ အသငျးဖျောအခငျြးခငျြးပွောဆိုရငျ ဂိမျးပှဲကို ရှုံးနိမျ့အောငျ ပွုလုပျသလိုဖွဈနိုငျပွီး ပွိုငျဘကျအသငျးမှ ကစားသမားမြားကို ပွောသူမြားဟာလညျး esports စိတျဓာတျ မရှိသူမြားအဖွဈသတျမှတျခွငျး ခံရနိုငျပါတယျ။ ကစားသမားတိုငျးဟာ အနှောငျ့အယှကျပေး ပွောဆိုခံရတာ နညျးပါးပွီး ပြျောရှငျဖို့ကောငျးတဲ့ ကစားပှဲမြားကိုသာ အလိုရှိနကွေတာပဲ ဖွဈပါတော့တယျ။